मन पर्ने व्यक्ति राखी बाँध्न आए के गर्नुहुन्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः श्रावण २७, २०७६ - साप्ताहिक
मन पराउने र मन पर्ने धेरै भेटिन्छन्, यदि कोहि खास छन् भने त बाँध्दिनँ, नत्र भने बाँध्छु ।
मसँग बहिनीहरूको कमी छैन, धन्यवाद पर्दैन भनिदिन्थें ।
अब आफूले मन पराए पनि उनीहरूले दाजुभाइ सोचेका छन् भने त बाँधिदिन्छु ।
बिनोद न्यौपाने, अभिनेता
मेरो एउटा घटना त्यस्तै परेको छ, त्यसैले अहिले जो आउँछ उसलाई धन्यवाद बहिनी भन्दिने हो ।
बिहे नै भैसके पछि त के फरक पर्छ र ? तैपनि हल्का अप्ठ्यारो त लाग्छ होला, तर विवाहित मान्छेले नाइँ भन्न पनि मिलेन ।
गम्भीर विष्ट, मोडल तथा कोरियोग्राफर
म त केही नदेख्ने, केहि नसुन्ने हुन्छु होला ।
कुनै समस्या छैन, सजिलै दिदीबहिनी बनाउँछु ।
राखी भनेको दाजु–बहिनी, दिदी–भाइको सुमधुर सम्बन्ध हो । यो पबित्र सम्बन्धप्रति गम्भीर भएर मात्र हात दिन्छु ।
हरि हुमागाईं, छायाँकार
मेरो यो वर्ष जुठो परेको छ, राखी, टीका आदि केही लगाउनु हुँदैन भन्छु ।
मायाको अर्को प्रकार मानेर लगाइदिन्छु ।
यो गर्न खोजेको के हो भनेर सोध्छु ।
आर्जेश रेग्मी, नाट्यकर्मी
सुरुमा त बेहोस भइन्छ होला । पछि उठेर हातमा एलर्जी आएको छ । डाक्टरले केहीले छुनु हुन्न भन्या छ भन्छु ।
विमल गौतम, गायक
म राखी मेरी बहिनीबाहेक कसैलाई बाँध्न दिन्नँ ।
त्यो दिन ऐश्वर्या रायको फोन आए पनि उठाउन्न, कुरै खत्तम ।
हुँदैन, बरु बिहे गर्नु छ भने औंठी ल्याऊ भन्छु ।
हेर म तिमीलाई मन पराउँछु । राखीचाहिँ नबाधुम् है भन्दिन्छु ।
दीपक ओली, निर्देशक
उसलाई हँसाएर आनन्दले बस्छु ।
दुर्गिश थापा, निर्माता
मन परेकी युवती राखी बाध्न आए म त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्छु, सरी भन्छु । तपाईं र म राम्रो साथी नै ठीक छौं भन्छु ।
हिमांशु रायमाझी, गीतकार
अहिलेलाई राखीलाई थाती राखौं भनेर काखी चैं च्याप्छु होला ।
हरि पन्त, निर्माता
मजाले बाँधिदिन्छु । किनभने मलाई राखी लगाउन असाध्यै मनपर्छ । मैले गायक प्रताप दासको ‘लेखें एउटा गीत’मा राखी बाधिदिएको कथामा भिडियो पनि बनाएको छु ।
केदार धिताल, म्युजिक भिडियो निर्देशक
सुरुमा आश्चर्यचकित हुन्थें । माइती र चेलीको सुमधुर सम्बन्धप्रति आदर प्रकट गर्दै राखी बाध्न आउने युवतीलाई चेली मानेर ग्रहण गर्छु ।
दीपक बराइली, गायक
तिम्रो भाग्यमा यस्तै रहेछ । के गर्छौ त लौ अब विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्नुभन्दा राखी बाध्नु ठीक भन्छु, अनि नाडी दिन्छु ।
उसको खुसी नै मेरो खुसी हो भनेर राखी बाँधी हग गरेर पठाइदिन्छु
मन पराउनुको अर्थ धेरै तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । जस्तै आफुले कस्तो नजरले मन फराइएको व्यक्ति हो र त्यो व्यत्तिले कस्तो नजरले नजिक हुन् वा अर्कोलाई हेर्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । कहिलेकाहीँ आफूले मात्रै मन पराएको र उसको मनमा आफूले सोचेजस्तो नभएको हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा दाजुभाइ, दिदीबहिनीको पवित्र नाताले जोडिएर एउटा असल मित्रता कायम सकिन्छ वा आफूलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागे राखी नबाँध्न पनि सकिन्छ ।
उनीले मलाई दाइ वा भाइका रूपमा सम्बन्ध बनाउन चाहेपछि मैले नाइँ भन्न मिल्दैन नि । दृष्टि र कोण आ–आफ्नै हुन्छ ।
बेहोस् भएको नाटक गर्थें ।
मनिषा पोखरेल, गायिका
रक्षा बन्धनजस्तो भावनात्मक अनि आत्मीय कुरा जो कसैले सजिलै मनाउन पाउँदैन । यस्तो अवसरमा मन परेकी युवयुवती हुन् वा अरु कोहि आफ्नो दाजुभाइ सम्झी राखी बाध्न आउनुहुन्छ भने म आफूलाई भाग्यमानी र गौरवान्वित महसुस गरी हाँसी–हाँसी तयार हुनेछु ।
दिव्य सुवेदी, छायाँकार